Xinuos akatora matanho epamutemo kurwisa IBM uye Red Hat | Linux Vakapindwa muropa
Xinuos akatora matanho epamutemo kurwisa IBM neRed Hat
Munguva pfupi yapfuura nhau dzakabvarura izvo Xinuos vanhu vakatora matanho epamutemo kurwisa IBM neRed Hat uye ndiXinuos uya inoti IBM yakateedzera zvisiri pamutemo kodhi yeXinuos yeayo server inoshandisa masystem uye yakarangana neRed Hat kupatsanura zvisiri pamutemo musika.
Sekureva kwaXinuos, iyo IBM-Red Hat kubatanidzwa yakakuvadza yakavhurika sosi nharaunda, vatengi nemakwikwi, uye zvakatadzisa hunyanzvi. Kusanganisira zviito zveIBM neRed Hat zvekugovana musika, kupa zvavanofarira, uye kusimudzira zvigadzirwa zvemumwe nemumwe zvakakanganisa kugoverwa kwechigadzirwa cheXinuos kuOpenServer 10, iyo inokwikwidza neRed Hat Enterprise Linux.
Xinuos kambani (UnXis) muna 2011 yakatenga bhizimusi reSCO Group bhizinesi rakaramba richivandudza uye OpenServer inoshanda sisitimu. OpenServer ndiye anotsiva SCO UNIX uye UnixWare, asi kubva pakaburitswa OpenServer 10, sisitimu yekushandisa yakavakirwa paFreeBSD.
Maitiro acho akagadzirwa munzira mbiri: kutyora mutemo weantitrust uye kutyora midziyo yehungwaru. Chikamu 1 chinotarisa kuti sei, vachitonga musika weUnix / Linux server masisitimu anoshanda, IBM neRed Hat vakatsiva masystem anokwikwidza akadai seFreeBSD-based OpenServer.
“IBM yakaita zvirevo zvinoratidzira uye zvine hunyanzvi mumasevhisi ekuratidzira nezve kutora chikamu kwayo muCode. Mune rondedzero yega yega yegore yakamisikidzwa neSec kubva muna2008, IBM yakataura kuti wechitatu ane kodzero dzekopiriti kuUNIX neUnixWare, uye kuti wechitatu uyu akabvisa chero chikumbiro chekutyorwa neBM.
Xinuos anoti kudzvinyirira kweIBM pamusika uye Red Hat kubatanidzwa yakatanga kare IBM isati yatenga Red Hat, Kudzoka mumazuva apo UnixWare 7 uye OpenServer 5 yaive nemugove wakakura wemusika. Kutorwa kweBMR yeRed Hat kunodudzirwa senge kuyedza kusimbisa kubatanidza uye kufambisa chirongwa chakashandiswa kuchikamu chenguva dzose.
Chikamu chechipiri, chakanangana nepfuma, iko kuenderera kwemutongo wekare pakati peSCO neBMM, iyo yakambopedza zviwanikwa zveSCO ikatungamira mukubhuroka kwekambani. Mhosva yemutemo inoti IBM zvisiri pamutemo yaishandiswa njere pfuma naXinuos kugadzira uye kutengesa chigadzirwa chakakwikwidza neUnixWare uye OpenServer, uye vakabiridzira vatengesi nezvekodzero dzavo dzekushandisa kodhi yeXinuos.
Pakati pezvimwe zvinhu, zvinonzi mumushumo wa2008 wakatumirwa kukomisheni yekuchengetedzeka, paive neruzivo rwekunyepa kuti kodzero dzenhengo dzeUNIX neUnixWare ndezvewechitatu, uyo akaregedza chero kupihwa mhosva kune IBM kune chekukanganisa. kurudyi kwako.
Sekureva kwevamiriri veIBM, mhosva idzi hadzina hwaro uye kungodzokorora zvirevo zvekare zveSCO, zvine hungwaru hupfumi zvakaguma zviri mumaoko aXinuos mushure mekubhuroka. Kupomedzerwa kwekutyora mitemo yeantitrust kunopesana nepfungwa dzekuvhurwa kwenzvimbo.
IBM neRed Hat vanozoita zvavanogona kuchengetedza kuvimbika kwenzvimbo dzakavhurika dzekudyidzana nzira dzekuvandudza, sarudzo nemakwikwi zvinokurudzira kuvhura sosi sosi
Yeuka kuti muna 2003 SCO yakapomera IBM yekuendesa iyo Unix kodhi kune vanogadzira Linux kernel, mushure meizvozvo zvakaonekwa kuti kodzero dzese dzekodhi yeUnix dzaisava dzeSCO, asi dzaNovell.
Zvadaro, Novell akamhan'arira SCO yekushandisa midziyo yeumwe munhu kumisikidza mamwe makambani. Naizvozvo, kuenderera mberi nekurwiswa kwayo nevashandisi veBMM neLinux, SCO yakatarisana nekudiwa kwekuratidza kodzero dzayo kuUnix.
SCO haina kubvumirana nechinzvimbo chaNovell, asi mushure memakore ekudzokororwa kumatare, dare rakatonga kuti mukutengesa bhizinesi rayo rine chekuita neUnix kuenda kuSCO, Novell haana kuendesa hunhu hwehungwaru kuCSO, nemitero yese yakaunzwa nemagweta eSSO kune mamwe magweta. makambani haana hwaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Xinuos akatora matanho epamutemo kurwisa IBM neRed Hat
Nitrux 1.3.9 inosvika yakavakirwa paDebian, kugona kusarudza iyo Kernel kuisa uye nezvimwe